နေမာရဲ့ ခြေစွမ်းက ဖီဖာဆန်ကာတင်စာရင်းမှာ ပါဖို့ တစ်ကယ်ပဲ မထိုက်တန်ခဲ့တာလား?
၂၀၁၇-၁၈ ဘောလုံးရာသီမှာ ကလပ်နဲ့ နိုင်ငံအတွက် ၄၃ ပွဲ ကစားပြီး ၃၃ ဂိုးသွင်းကာ ဂိုး ၂၀ ဖန်တီးပေးထားနိုင်သူဖြစ်ပြီး ကလပ်အသင်းနဲ့ ပြည်တွင်းဆုဖလား ၃ လုံးရရှိထားပါတယ်။
Photo - www.aa.com.tr
ဖီဖာ တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုပေးအပ်နိုင်ရေးအတွက် ယခုအခါ ဆန်ကာတင် ကစားသမား (၁၀)ဦးကို ရွေးထုတ်ခဲ့ရာမှာတော့ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းက ပြောင်းရွှေ့ကြေး အများဆုံး ကစားသမား နေမာ မပါဝင်လာပါဘူး။
ဒီအခြေအနေမှာ ရီးရဲက ရော်နယ်ဒို(ဂျူဗင်တပ်)၊မိုဒရစ်၊ဗာရနီတို့ ပါဝင်လာခဲ့သလို ဘာစီလိုနာကလည်း မက်ဆီနဲ့ အက်သလက်တီကိုက ဂရုဇ် မန်းတို့ ပါင်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အခြားကစားသမားများအဖြစ် ဒီဘရိုင်း၊ဘတ်ပေး၊ကိန်း၊ဆာလာနဲ့ ဟာဇက်တို့လည်း ပါဝင်လာခဲ့ပေမယ့် နေမာကတော့ ချန်လှပ်ခံခဲ့ရ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖီဖာက ပေးအပ်မယ့် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုအတွက် ဆန်ခါတင်စာရင်း
ဒီဆုရဲ့ ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာ ပါဝင်လာခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေအကြောင်းမပြောပဲ မပါဝင်လာခဲ့တဲ့ နေမာရဲ့ အကြောင်းကို ပြောချင်ပါတယ်။
နေမာက ဘရာဇီးကလပ် ဆန်းတို့စ်အသင်းကနေ ဘာစီလိုနာ၊ဘာစီလိုနာကနေ ပီအက်စ်ဂျီကို စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ရောက်ရှိခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
Photo - FIFA.com
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နောက်ဆုံး ဆန်ကာတင် ၃ ဦးစာရင်းထိ ပါဝင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ရော်နယ်ဒို၊မက်ဆီတို့နောက် အဆင့် (၃)နေရာသာရပ်တည် ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်မှာတော့ ဆန်ကာတင် ၁၀ ဦးစာရင်းထဲပင် မပါဝင်တာကတော့ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းနဲ့ ဖလား ၃ လုံး ရယူထားတဲ့ နေမာအတွက် မျှ တရဲ့လားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်ချင်စရာပါ။
Photo - Quartz
နေမာက ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇-၁၈ ဘောလုံးရာသီတစ်ခုလုံးမှာ နိုင်ငံနဲ့ ကလပ်အသင်းအတွက် စုစုပေါင်း ပွဲ ၄၃ ပွဲကစားပေးခဲ့ပြီး ၃၃ ဂိုးသွင်းကာ ဂိုး ၂၀ ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မိခင်ကလပ် ပီအက်စ်ဂျီအသင်းနဲ့လည်း ဖလား ၃ လုံးရယူနိုုင်ခဲ့တာဟာ ဒီနှစ် ဖီဖာ အကောင်းဆုံး ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာ ပါဝင်ခွင့်ရဖို့ မလုံလောက်ခဲ့ပါဘူး။
Fifa The Best Men's ဆုအတွက် ၂၀၁၇၊ ဇူလိုင် (၃) ရက်ကနေ ၂၀၁၈၊ ဇူလိုင် (၁၅)ရက်နေ့အတွင်း အကျုံးဝင် ရက်များအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအဆင့်အဖြစ် ကစားသမား (၃)ဦးကို ပြန်လည်ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပြီး ဇူလိုင် (၂၄) ရက်ကနေ သြဂုတ်လ (၁၀)ရက်နေ့အတွင်းမှာ မဲပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မဲပေးဖို့အတွက် ဂျာနယ်လစ်များ၊ ပရိသတ်များ၊ နိုင်ငံအသင်းနည်းပြများနဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်များက မဲပေးရွေးချယ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန္ဒမဲအများဆုံး ရရှိတဲ့ ကစားသမားကို အကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ် သတ်မှတ်ရွေးချယ်ပြီး စက်တင်ဘာ (၂၄ရက်နေ့၊ လန်ဒန်မြို့မှာ ဆုချီးမြှင့်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအခြေအနေမှာ နေမာလို ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးရရှိထားတဲ့ ကစားသမားက ဆန်ကာတင် ၁၀ ဦးစာရင်းမှာ မပါလာဘူးဆိုတော့ အကောင်းဆုံး ကစားသမားတွေကိုမှ စံချိန်တင်ကြေးတွေ ပေးခေါ်နေတဲ့ ကလပ်အသင်းတွေကို ဖီဖာက ထောက်ပြလိုက်လေအလား ထင်ရ ပါတော့တယ်။
တစ်ခုရှိတာက နေမာက ပြီးခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ သူ့ရဲ့ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ချိန်မှာ ပြုမူခဲ့တဲ့ အပြုအမူကလည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး ကစား သမားကောင်း မပီသတဲ့ အပြုအမူမျိုးအပေါ်မှာ ပရိသတ်တွေက ဝေဖန်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် အကောင်းဆုံး ကစားသမားတွေဆိုတာ ငွေကြေးနဲ့ သတ်မှတ်လို့မရဘူးဆိုတာကို နေမာက သိသိသာသာကြီး ပြသလိုက်သလိုပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် တစ်ကယ်ပဲနေမာက ဒီစာရင်းမှာ ပါဖို့ မထိုက်တန်ခဲ့တာလား၊ပရိသတ်ကြီးကရော နေမာရဲ့ ခြေစွမ်းအပေါ် ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထား ပါသလဲ?
၂၀၁၇-၁၈ ေဘာလုံးရာသီမွာ ကလပ္နဲ႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ၄၃ ပြဲ ကစားၿပီး ၃၃ ဂိုးသြင္းကာ ဂိုး ၂၀ ဖန္တီးေပးထားႏိုင္သူျဖစ္ၿပီး ကလပ္အသင္းနဲဲ႔ ျပည္တြင္းဆုဖလား ၃ လုံးရရွိထားပါတယ္။
ဖီဖာ တစ္ႏွစ္တာ အေကာင္းဆုံး ကစားသမားဆုေပးအပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ယခုအခါ ဆန္ကာတင္ ကစားသမား (၁၀)ဦးကို ေရြးထုတ္ခဲ့ရာမွာေတာ့ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းက ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး အမ်ားဆုံး ကစားသမား ေနမာ မပါ၀င္လာပါဘူး။
ဒီအေျခအေနမွာ ရီးရဲက ေရာ္နယ္ဒို(ဂ်ဴဗင္တပ္)၊မိုဒရစ္၊ဗာရနီတို႔ ပါ၀င္လာခဲ့သလို ဘာစီလိုနာကလည္း မက္ဆီနဲ႔ အက္သလက္တီကိုက ဂရုဇ္ မန္းတို႔ ပါင္လာခဲ့ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ အျခားကစားသမားမ်ားအျဖစ္ ဒီဘရိုင္း၊ဘတ္ေပး၊ကိန္း၊ဆာလာနဲ႔ ဟာဇက္တို႔လည္း ပါ၀င္လာခဲ့ေပမယ့္ ေနမာကေတာ့ ခ်န္လွပ္ခံခဲ့ရ တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီဆုရဲ႕ ဆန္ကာတင္စာရင္းမွာ ပါ၀င္လာခဲ့တဲ့ ကစားသမားေတြအေၾကာင္းမေျပာပဲ မပါ၀င္လာခဲ့တဲ့ ေနမာရဲ႕ အေၾကာင္းကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။
ေနမာက ဘရာဇီးကလပ္ ဆန္းတို႔စ္အသင္းကေန ဘာစီလိုနာ၊ဘာစီလိုနာကေန ပီအက္စ္ဂ်ီကို စံခ်ိန္တင္ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးနဲ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆုံး ဆန္ကာတင္ ၃ ဦးစာရင္းထိ ပါ၀င္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ေရာ္နယ္ဒို၊မက္ဆီတို႔ေနာက္ အဆင့္ (၃)ေနရာသာရပ္တည္ ထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ဆန္ကာတင္ ၁၀ ဦးစာရင္းထဲပင္ မပါ၀င္တာကေတာ့ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းနဲ႔ ဖလား ၃ လုံး ရယူထားတ့ဲ ေနမာအတြက္ မွ် တရဲ႕လားဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္စရာပါ။
ေနမာက ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇-၁၈ ေဘာလုံးရာသီတစ္ခုလုံးမွာ ႏိုင္ငံနဲ႔ ကလပ္အသင္းအတြက္ စုစုေပါင္း ပြဲ ၄၃ ပြဲကစားေပးခဲ့ၿပီး ၃၃ ဂိုးသြင္းကာ ဂိုး ၂၀ ဖန္တီးေပးခဲ့ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ မိခင္ကလပ္ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းနဲ႔လည္း ဖလား ၃ လုံးရယူႏိုုင္ခဲ့တာဟာ ဒီႏွစ္ ဖီဖာ အေကာင္းဆုံး ဆန္ကာတင္စာရင္းမွာ ပါ၀င္ခြင့္ရဖို႔ မလုံေလာက္ခဲ့ပါဘူး။
Fifa The Best Men's ဆုအတြက္ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ (၃) ရက္ကေန ၂၀၁၈၊ ဇူလိုင္ (၁၅)ရက္ေန႔အတြင္း အက်ံဳး၀င္ ရက္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္အျဖစ္ ကစားသမား (၃)ဦးကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ျပီး ဇူလိုင္ (၂၄) ရက္ကေန ၾသဂုတ္လ (၁၀)ရက္ေန႔အတြင္းမွာ မဲေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအေျခအေနမွာ ေနမာလို ကမၻာ့စံခ်ိန္တင္ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးရရွိထားတဲ့ ကစားသမားက ဆန္ကာတင္ ၁၀ ဦးစာရင္းမွာ မပါလာဘူးဆိုေတာ့ အေကာင္းဆုံး ကစားသမားေတြကိုမွ စံခ်ိန္တင္ေၾကးေတြ ေပးေခၚေနတဲ့ ကလပ္အသင္းေတြကို ဖီဖာက ေထာက္ျပလိုက္ေလအလား ထင္ရ ပါေတာ့တယ္။
တစ္ခုရွိတာက ေနမာက ၿပီးခဲ့တဲဲ့ ကမၻာ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲမွာ သူ႔ရဲ႕ ဒဏ္ရာရရွိိခဲ့ခ်ိန္မွာ ျပဳမူခဲ့တဲ့ အျပဳအမူကလည္း ကမၻာေပၚမွာပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ၿပီး ကစား သမားေကာင္း မပီသတဲ့ အျပဳအမူမ်ိဳးအေပၚမွာ ပရိသတ္ေတြက ေ၀ဖန္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အေကာင္းဆုံး ကစားသမားေတြဆိုတာ ေငြေၾကးနဲ႔ သတ္မွတ္လို႔မရဘူးဆိုတာကို ေနမာက သိသိသာသာႀကီး ျပသလိုက္သလိုပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္ တစ္ကယ္ပဲေနမာက ဒီစာရင္းမွာ ပါဖို႔ မထုိက္တန္ခဲ့တာလား၊ပရိသတ္ႀကီးကေရာ ေနမာရဲ႕ ေျခစြမ္းအေပၚ ဘယ္လိုသတ္မွတ္ထား ပါသလဲ?